Booliska Soomaaliya oo soo bandhigay baabuur ay Shabab ka qabsadeen | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Booliska Soomaaliya oo soo bandhigay baabuur ay Shabab ka qabsadeen
Booliska Soomaaliya oo soo bandhigay baabuur ay Shabab ka qabsadeen
Dagaal u dhexeeyay Ciidanka Booliska Soom aaliya ee Haramcad iyo Al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu xalay ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka Magaalada Muqdisho, waxaana ka soo baxaya Faahfaahino dheeraad ah.
Dagaalkaan ayaa bilowday ka dib markii xubno ka tirsan Al-shabaab ay weerar ku qaadeen Bar koontarool oo Ciidanka Haramcad ay ku leeyihiin deegaanka Xaawo Cabdi gaar ahaan halka laga ilaaliyo wadada isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Haramcad ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid Shabaabka, isla markaana uu dhacay dagaal kooban oo dhexmaray ayaga iyo koocdii Weerarka ku soo qaaday wallow markii dambe xaaladda ay si caadi ah kusoo laabatay.
Saraakiisha Booliska Soomaaliya ayaa tilmaamay inay gacanta ku dhigeen saddex kamid ah xubnihii weerarka ku qaaday Ciidanka Booliska ee ku sugnaa Barta koontarool ee ay ku leeyihiin deegaanka Xaawo Cabdi, iyagoona soo bandhigay gaari nooca Soomaalida u taqaano NOHA oo ay Xalay qabsadeen.
Previous articleMadaxweynaha dalka oo soo jeediyay in Afrika ay soo saarto tallaalka COVID19
Next articleCabdi Xaashi oo ka digay ansixinta sharciyo aan aqalka sare soo marin